Milan-San Remo ပွဲမှာ Arnaud Demare (Fra) FDJ အနုိုင်ရသွားပြီ...။ ~ Htet Aung Kyaw
Milan-San Remo ပွဲမှာ Arnaud Demare (Fra) FDJ အနုိုင်ရသွားပြီ...။
Spring Classic နွေဦးအထူးပွဲ အဖြစ် နာမည်ကြီးလှတဲ့ Milan-San Remo ပွဲ အခုမီနစ်ပုိုင်းအတွင်း စတင်ပါတော့မယ်။ စက်ဘီးသမား ၂၄၀ ကျော်ဟာ ကီလုိုမီတာ ၂၉၁ ကုို စီးနုိုင်ဖို့အတွက် နေရာယူနေကြပါပြီ။
၆ နာရီကျော် (တနေကုန်) စီးရမဲ့ ခရီးကြမ်းမှာ ဘယ်သူအနုိုင်ရနုိုင်မလဲ...။
Live ဖတ်နုိုင်ပါတယ်။ Euro Sport နဲ့ အခြား တိဗွီ လုိုင်း တွေကလည်း ပန်းဝင်ခင် ၃ နာရီခန့်ကို လုိုက်ဖ် ပြပေးပါလိမ့်မယ်...။
စက်ဘီးသမားတွေဟာ တာမထွက်ခင် လက်မှတ်ထုိုးနေကြပြီး တရားဝင် တာ မလွတ်ခင် ၉ ကီလုိုကုို (မြို့တွင်း) အလှပြသွေးပူ စီးကြရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းတာကတော့ ဒီနေ့ နေသာနေခြင်းပါ။ လမ်းတလျောက်လုံး နေသာလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပေမဲ့ မသေချာလှပါ။
271km remaining from 291km.
တာထွက်ပြီး ၁၅ ကီလုိုအတွင်း ၁၁ ဦးပါ Breakaway အဖွဲ့တခုဖြစ်တဲ့ (Gediminas Bagdonas (Ag2r La Mondiale), Serghei Tvetcov (Androni Sidermec), Mirco Maestri (Bardiani CSF), Jan Barta (Bora Argon 18), Adrian Hurek (CCC-SPRANDI-POLKOWICE), Roger Kluge (IAM Cycling), Matteo Bono (Lampre - Merida), Samuele Conti (Southeast - Venezuela), Maarten Tjallingii (LottoNL - Jumbo), Andrea Peron (Team Novo Nordisk) and Marco Coledan (Trek Segafredo) ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပါတယ်။
၂ မီနစ်အထိ Peloton ကိုဖြတ်ထားနုိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခရီးအဝေးက ကီလုို ၃၀၀ ဆုိုတော့ ဒီ အဖွဲ့ ဘယ်လောက်အထိပြေးနုိုင်မလဲ...။ Peloton က ဘယ်အချိန် အရှိန်တင်ပြီးလုိုက်မလဲ...။
၂၅ ကီလုိုအကျော်မှာ gap က 4'25 (၄ မီနစ် ၂၅ စက္ကန့်) အထိ ရှိသွားဟုဆုို...။
29km remaining from 291km.
ကီလုို ၃၀ ခန့်စီးအပြီးမှာ gap က 9'40 အထိဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုဆိုရင်
peloton ဟာ ဒီတုိုင်းနေလုို့မရတော့ပါ။ အရှိန်မြင့်လုိုက်ရပါတော့မယ်...။
(အပြင်သွားပါဦးမည်... ပန်းမ၀င်ခင် ၃ နာရီအလုိုမှာ ပြန်တွေ့ပါဦးမည်)။
အခုလေးတင် ပန်းဝင်သွားပါပြီ။ ထင်ထားတဲ့ နာမည်ကြီးတွေ တယောက်မှ မရလုိုက်ပါဘူး။
ကျနော်တုို့ရဲ့ ဇတ်လုိုက်ကြီး မောင်ဆာဂန်ကတော့ ကံဆုိုးတယ်ပြောရမယ်။ ပန်းဝင်ဖုို့ မီတာ ၃၀၀ လောက်အလုို နေရာအသအချာယူရမဲ့အချိန်ကျမှ သူ့ဘေးကတယောက် ကပ်ပြီလဲချ (လှဲချသလားလုို့တောင် သံသယရှိစရာ) လုိုက်လုို့ မနည်းလွတ်အောင်ရှောင်ရင်းနဲ့ အာရုံ နောက်ပြီး စပရင့် မတင်နုိုင်၊ လမ်းကြောင်းမရနုိုင်ဖြစ်သွားပုံပါပဲ။
ဒီနေ ၁-၁၀ စာရင်းကတော့...
12 Peter Sagan (Svk) Tinkoff Team တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
ရှေ့ပုိုင်းမှာတင်ပြခဲ့တဲ့အတုိုင်း ၁၁ ဦးပါ Breakaway အဖွဲ့တခု ထွက်ပြေးသွားလုိုက်တာ ၁၀ မီနစ် ခွဲလောက် အထိပြတ်သွားပါတယ်။ ကီလုို ၁၀၀ လောက်အလုိုကျမှ Peloton က စတင်အရှိန် မြင့်လုိုက်တဲ့အတွက် Gap ဟာ တဖြေးဖြေးကျလာပါတယ်။ ကျတဲ့နှုန်းက သိပ်နှေးတဲ့အတွက် ပန်းဝင်ဖုို့ ၂၃ ကီလုိုမီတာအလုိုမှာမှ အားလုံးကုို ပြန်ဖမ်းမိပါတယ်။
အဲဒီလုို မဖမ်းမိခင်ကာလအတွင်း (စက်ဘီးသမားအားလုံး ၂၄၈ ဦး) Peloton ထဲမှာ လူများ လွန်းတော့ လမ်းကြောင်းပိတ်မိပြီး အချင်းချင်းချိတ်မိတာ၊ လမ်းဘေးမှာကားရပ်ထားလုို့ လမ်း ကျဉ်းပြီး ညှပ်မိတာတွေကြောင့် ကြီးမားတဲ့ ပြိုလဲမှု နှစ်ကြိမ်ထဲ မနည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
တကြိမ်မှာဆုို စက်ဘီးဂွေတောင်ကောက်လိမ်သွားတဲ့အတွက် အတော်အရှိန်ပြင်းပုံရပါတယ်။ စက်ဘိးသမားလည်း ဆက်မစီးနုိုင်တော့ပါဘူး။ နောက်တကြိမ်မှာတော့ ပြိုလဲသူ ပုိုများပြီး လူ ၂၀ လောက်တောင်ရှိမယ်ထင်ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့ ပထမ ရနုိုင်တယ်လုို့ခန့်မှန်းခြင်းခံထားရသူ အားလုံးနီးပါးကတော့ ဘေးမသီ ရန်မခပဲ အုပ်စုအတွင်း စီးမျောလုိုက်လာနုိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလုိုနဲ့ ၂၃ ကီလုို မီတာမှာ ရှေ့ပြေး အဖွဲ့ ကိုဖမ်းမိသွားပါတယ်။
အဓိပယ်ကတော့ Clasics သမားတွေ ရဖုို့အလာအလာနည်းသွားပြီး Sprinter တွေရဖုို့ အား သာလာတယ်၊ တနည်းအားဖြင့် ပန်းဝင်ခါနီးမှာ စပလင့်တင်ပြီး အဆုံးအဖြတ်ပေးရမဲ့ပွဲအဖြစ် အဖြေကပြောင်းသွားပါတယ်။
ဒီလုိုနဲ့ ပန်းဝင်ဖုို့ ၈ ကီလုိုလောက်အလုိုမှာ စကုိုင်းအသင်းမှ Kwiatkowski စပြေးပါတယ်။ ဘယ်သူဦးဆောင်လုိုက်မလဲဆုိုတာ Peloton အတွင်း သဘောတူညီချက်ရပုံမရှိ။ ပထမ ပုိုင်းမှာ ဆာဂန်လုိုက်ပေမဲ့ ခဏလေးနဲ့ရပ်ပြီး နောက်လူတွေကုိုလုိုက်ဖုို့လမ်းဖွင့်ပေးလုိုက် ပါတယ်။
၅ ကိလုိုလောက်အလုိုမှာတော့ နီဘာလီ တကိုယ်တော် ထွက်ပြီးလုိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မလွတ်ပါဘူး။ ကာဝါစကီက ၅ စက္ကန့်လောက်အသာနဲ့ ၂ ကီလုိုလောက်အလိုအထိ ဆက် ပြေးနေဆဲပါ။
ဒီလုိုနဲ့ ပန်းဝင်ဖို့ တကီလုိုနီးပါးအလုိုအရောက်မှာတော့ ထူးထူးခြားခြား နော်ဝေးမှ တာဝေး ဆရာကြီး မောင်ပြုံးချို (ဟာဂန်) Boassan Hagen တကို်ယ်စပြိး စပရင့်တင်ပါတယ်။ သူ့နောက်မှာ Van Avermaet က ကပ်ပြီးပါသွားပါတယ်။ ကျန်လူတွေက မလုိုက်ပဲ အားဖြည့်နေဆဲ။
ပန်းဝင်ဖုို့ မီတာ ၁၀၀၀ ၀န်းကျင်အလုိုမှာတော့ ဆာဂန်ဦးဆောင်တဲ့ ၄ ဦးပါအဖွဲ့က ဟာဂန်တုို့ ၂ ဦးကို ဖမ်းမိပြီး ပထမ ရနုိုင်ခြေရှိသူ အားလုံးတအုပ်တည်းပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ပန်းဝင်စည်း စပရင့်အတွက် အားလုံးနေရာယူ အားမွေးနေချိန် မီတာ ၄၀၀ လောက်အလုိုမှာ ဘယ်လို ဖြစ်မှန်းမသိ။ ပီတာ ဆာဂန်ဘေးနားမှာစီးနေတဲ့ Etixx-Quickstep အသင်းမှ Fernando Gaviria ရုတ်တရက်ပြိုဆင်းသွားပါတယ်။
ဆာဂန်သာ စက်ဘီးကိုကျွမ်းကျင်စွာမကိုင်တွယ်တတ်ရင် သူပါလဲပြီး တပြုံကြိးပိတ်မိမဲ့ပုံပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကံကောင်းစွာနဲ့ သူဟာ လွတ်အောင်ရှောင်နုိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကံမကောင်းချင် တော့ သူတုို့အဲဒီလုို အရှိန်လျော့ချပြီး ရှောင်လုိုက်ရတဲ့အချိန်ဟာ အခု ပထမ ရသွားတဲ့ အုပ်စု က အရှိန်မြင့်ပြီး စပရင့်စတင်တဲ့အချိန်နဲ့ ကွက်တိဖြစ်သွားပါတယ်။
ဒီလုိုနဲ့ အဖြေဟာ အခုမြင်ရတဲ့အတုိုင်း ထွက်လာပါတယ်။ ဆာဂန်တုို့နဲ့တအုပ်ထဲကနေ ပထမ ရနုိုင်ခြေရှိသူ Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits ကလည်း ပန်းဝင်စည်း နားရောက်မှ ချိန်းကြိုးကျလုို့ မကျေမချမ်းနဲ့ လက်ကိုင်ကို လက်နဲထုနေတာ မြင်လုိုက်ရပါ တယ်။
စက်ဘီးပွဲဟာလည်း စာမေးပွဲလုိုပဲပေါ့။ တခါတလေ ထင်ထားသလုိုဖြစ်မလာတတ်ပဲ မထင် တာတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ သူဟာသူ ဘယ်လောက်တော်နေနေ ဒီနေ့မေးတဲ့ မေးခွန်းနဲ့ ကုိုယ်လေ့ကျင့်ထားတာနဲ့ တထပ်တည်းမကျရင် လွဲပြီပေါ့။
ပွဲအပြီး ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဘာပြောမလဲ ဆက်ပြီးနားထောင်ကြည့်ရပါဦးမယ်။ ဒီပွဲမှာ ကုိုယ်ထင် ထားတဲ့လူတွေ အနုိုင်မရလုို့ စိတ်မပျက်ပါနဲ့ဦး။ သဖက်ခါ တနလာင်္နေပမှာ ဒီထက်ကောင်းတဲ့ ၇ ရက်တာ ပွဲကြီးတခုရှိနေပါသေးတယ်။
ဆာဂန်နဲ့အတူ ပြိုလဲမှုအတွင်း အရှိန်လျော့ချလုိုက်ရသူ ကာစီးလားလာရဲ့ပြောဆိုချက်တော့ ထွက်လာပြီ...။ Sometimes you win big. More often you lose.
Cycling is not predictable, and that's what makes this sport so exciting.. တဲ့။
(တခါတရံမှာ ခင်ဗျားဟာ အောင်ပွဲအကြီးကြီးနုိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အကြိမ်အတော်များ များမှာတော့ ခင်ဗျားဟာ အရုံးကုိုရင်ဆုိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ စက်ဘီးပွဲဆုိုတာဟာ ကြိုတင်ခန့်မှန်း ဖုို့ခက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ စိတ်လှုပ်ရှားဘွယ်ကောင်းတဲ့ အားကစားတခု ဖြစ်နေတာပေါ့။ ကာစီလာလားအတွက် မီလန်-စန်မိလုို အိပ်မက်ကတော့ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ သူမကြိုးစားခဲ့လုို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး တဲ့။)။
ဆာဂန်ရဲ့ မှတ်ချက်လည်း ထွက်လာပါပြီ...
အရင်က ကျနော်ပြောခဲ့တဲ့အတုိုင်းပါပဲ၊ Milano-Sanremo ပွဲဟာ ကြိုတင်ခန့်မှန်းဖုို့ ခက်လှ ပါတယ်။ ကျနော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ အသင်းကလည်း အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ ပေးခဲံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ ပြိုင်ပွဲလေ...လုို့ သူကဆုိုပါတယ်။
နောက်ဆုံးအဖြစ်အပျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သူပြောတာက... Fabian (ကာစီးလာလားး) စပြီး ထွက်ပြေးတဲ့အချိ်န်မှာ ကျန်လူတွေကိုကျနော်ပြောပါတယ်။ ငါတုို့မလုိုက်ရင်တော့ ပွဲက ဒီမှာ တင်ပြီးသွားပြီဆုိုပြီးတော့၊ ဒါပေမဲ့ တကယ်တန်းဦးဆောင်လုိုက်နုိုင်သူက ကျနော်တဦးတည်း ပါ။
သူကုိုဖမ်းမိပြီးတဲ့နောက်မှာ Boasson Hagen တုို့ထွက်ပြေးပြန်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မီတာ ၄၀၀ လောက်အလုိုမှာ Gaviria က နောက်ကလုိုက်လာတဲ့အုပ်စုကို ပြန်လှည့်ကြည့်ပါတယ်။ (တကယ်က ပြိုလဲသူအပါဝင် ဆာဂန်တုို့ ၄ ဦးက ရှေ့မှာ နဲနဲပြတ်ပြီးပြေးနုိုင်ပြီးမှ အရှိန်ကို လျော့ချပြီး ပြေးလမ်းယူဖုို့နဲ့ စပရင့်တင်ဖုို့ အားယူနေချိန်) အဲဒီမှာ သူလဲကျသွားတာပါပဲ။ တော်တော့်ကို ကျင်းထဲကျပ်ထဲကနေ ကျနော်မလဲပဲ လွတ်သွားတာပါ။
ဒါပေမဲ့ အရှိန်က မရှိတော့ဘူးလေ၊ ဒီတော့ အရှိန်တင်ပြေးသူတွေကို ဘယ်လုိုမှ ပြန်ဖမ်းမိဖုို့ မလွယ်တော့ပါဘူး။ (ကီလုို ၂၉၁ ကုို ၇ နာရီနီးပါး စက်ဘီးပေါ်ထုိုင်ပြီးစီးခဲ့ရသည့်တုိုင်) ခင်ဗျား မှာ အင်ပြည့်အားပြည့်ဖြစ်နေရင်တောင် ပြိုင်ပွဲဆုိုတာ ဘယ်တော့ မှလွယ်ကူလေ့မရှိပါဘူး" လုို့ ဆာဂန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒီစနေပွဲပြီးရင်တော့ ရှိသမျှ နာမည်ကြီးတွေ အားလုံးပါတဲ့ စပိန်ပွဲတခုရှိနေပါတယ်။ အားလုံးပါ ဖုို့ဆုိုတာ မလွယ်ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဆုိုရင် Grand Tour ချန်ပီယံလုို့ခေါ်ကြတဲ့ ၂၁ ရက်ပွဲမှာ ပထမ ရထားသူတွေဟာ အီတလီပွဲကုိုဝင်ရင် တုိုးဒီဖရင့်ကို မ၀င်ပါဘူး။ တုိုးဒီဖရင့်ကို ၀င်ရင် စပိန်ပွဲကို မ၀င်ပါဘူး။ တနှစ်အတွင်း ဒီ ၃ ပွဲစလုံးမှာ ပထမ ရဖုို့ဆုိုတာမဖြစ်နုိုင်သလုို အခုထိ လည်းတဦးမှ မရဘူးသေးပါဘူး။
အခု စပိန်မှာကျင်းပမဲ့ (March 21-27), Calella, Catalunya, Road - WorldTour မှာတော့ လက်ရှိ တုိုးဒီဖရင့်ချန်ပီယံ အ၀ါရောင်အကျီပုိုင်ရှင် Chris Froome (Sky), တုိုးဒီဖရင့် ၂ ကြိမ် ဒုတိယ Nairo Quintana (Movistar), အီတလီ ဂျီရိုချန်ပီယံ ပန်းရောင်အကျီပုိုင်ရှင် Alberto Contador (Tinkoff), စပိန် ဗုိုလ်တာချန်ပီယံ အနီရောင်အကျီပုိုင်ရှင် Fabio Aru (Astana Pro Team) နဲ့ defending champion Richie Porte (BMC Racing) တုို့က GC အတွက် အကြိတ်အနယ်ပြိုင်ပါလိမ့်မယ်။
နောက်တုိုးသတင်းအနေနဲ့တင်ပြချင်တာကတော့ လာမဲ့ တနလာင်္ (မတ်လ March 21-27 အထိ) စပိန်မှာ (ဘာစီလုိုးနားမှာ) သီတင်းတပတ်ကြာပွဲကြီးတခု စတင်မှာဖြစ်တဲ့အပြင် အဲဒီပွဲ နဲ့ တပြိုင်တည်းမှာ ပီတာဆာဂန်နဲ့ အခြားနာမည်ကြီးတွေဝင်စီးမဲ့ ဘလဂျီယံမှာ Spring Classics ပွဲတခုရှိနေပါသေးတယ်။
လာမဲ့ ဗုဒ္ဒဟူးနေ့ (မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့)မှာ E3 Harelbeke လုို့အမည်ပေးထားတဲ့ Spring Classics ပွဲတခုရှိနေပါတယ်။ ပြီးရင် (ဘာစီလုိုးနားပွဲပြီးတဲ့နေ့) မတ်လ ၂၇ မှာလည်း ဘလဂျီယံမှာပဲ Gent-Wevelgem ရှိနေပါတယ်။
အဲဒီ Classics ပွဲ နှစ်ခုစလုံးကုို ပီတာဆာဂန်နဲ့ နာမည်ကြီး စပလင့်တာအတော်များများဝင်ပြုိုင် မယ်လုို့သိရပါတယ်။ အဲဒီထဲက သိရသလောက်လူစာရင်းထဲမှာ ဒီနေ့ မီလန်ပွဲမှာ ၀င်ပြိုင်သူ အတော်များများပါနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
ဒီနေ့ ဆာဂန်နဲ့အတူ လဲပြိုမှုကနေ သီသီလေးလွတ်သွားတဲ့ ဆွင်ဇလန်မှ Cancellara, Stybar, Ian Stannard, Alexander Kristoff, Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), Greg Van Avermaet (BMC), နဲ့ Tom Boonen (Etixx-QuickStep) တုို့ဖြစ်ပါ တယ်။